Somaliland: Qodobbada Heshiis Laga Gaadhay Khilaafkii Komiishanka Iyo Doorashooyinka – HCTV
Cabdiqaadir Carab 0	February 27, 2020 4:45 pm
Hargeysa (HCTV) – Madaxweyaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi iyo Guddoomiyeyaasha labada Xisbi Mucaarad ee WADDANI iyo UCID, ayaa heshiis ka gaadhay khilaaf muddo soo jiitamay oo ku saabsanaa Guddiga cusub ee doorashooyinka Somaliland, kuwaasi oo Mucaaradku diidanaayeen xubno ku jira.
Shir Maanta ka dhacay xarunta Madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa waxa ku kulmay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Guddoomiyeyaasha xisbiyada UCID iyo WADDANI, Eng. Faysal Cali-waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo xubno ka socday beesha caalamka, ayaa lagu heshiiyey in komiishanka cusub iyo komiishankii hore ay wada shaqeeyaan, isla-markaana guddigii hore noqoto guddi farsamo oo qabanaysa doorashada Goleyaasha Wakiillada iyo deegaannada oo la qorsheeyay inay qabsoonto sannadkan guddihiisa, iyagoo kaashanaya saddex xubnood oo beesha caalamka ka socda, kuwaasi oo guddigii hore oo ka wakiil ah guddiga cusub ee doorashada la wadaya hawsha qabsoomidda doorashooyinka.
Heshiiska ay wada gaadheen Madaxweynaha iyo Hoggaamiyeyaasha Mucaaradka Somaliland ayaa u qornaa sidan:-
Ujeedada heshiishka waa in la dajiyo hanaan wada shaqayneed oo ay yeeshaan dhamaan dhinacyada oo ay ka mid tahay nidaamka xalinta khilfaafka si loo qabto doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo wakiilada sanadka 2020Qodobka 2aad: waajibaadka iyo masuuliyadda qabashada doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo golaha wakiilada.
1. guddida doorashooyinka qaranku waxay leeyihiin awood sharci ee doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo golaha wakiilada, waxaanay u igmanayaan guddida farsamada maamulka doorashooyinka dhamaan qabasahda hawlaha farsamo ee doorashooyinka si waafaqsan xeerarka iyo qawaaniinta doorashooyinka dalka sida:
2. Xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo madaxtooyadu, xeer lr 20/2001 oo uu wehelinayo kaabista iyo wax ka bedelka lagu sameeyo xeerka 2011.
3. Xeerka doorashada golaha wakiilada xeer lr 20-2/2005
4. Xeerka diirwaangalinta codbixiyeyaasha, xeer lr 37/2007 oo uu wehelinayo kaabistii iyo wax ka bedelkii lagu sameeyey 2014 iyo 2016
5. Xeerka anshaxa asxaabta qaranka 2017
6. Xeerka anshaxa saxaafadda 2017
7. Xeerka anshaxa xisbiyada siyaasada ee hannaanka diiwaangalinta codbixiyeyaasha 2009.
Qodobka 3aad:Waajibaadka iyo masuuliyada xubnaha gudida doorashooyinka qaranka
Si guddida farsamada maamulka doorashadu ugu diyaar garoobaan shaqadooda, guddida doorashooyinka qaranku waxay ka masuul yihiin u gudbinta xukuumada ee miisaaniyada doorashooyinka, magacaabista, caydhinta, xulashada iyo anshaxmarinta shaqaalaha iyo ku dhawaaqida taariikhda doorashada iyo natiijooyinka doorashooyinka.
Qodobka 4aad:Xubnaha gudida farsamada maamulka doorashada
Xubnaha guddida farsamada maamulka doorashadu waxa ay ka koobnaan doonaan.
1. Xubnihii hore ee gudid doorashooyinka qaranka (7xubnood) oo ah xubno cod leh.
2. Saddex xubnood oo ka socda bulshadda caalamka (sadex xubnood) oo xubno aan cod lahayn.
Sarkaalka u sareeya iyo ku-xigeenka guddida farsamada maamulka doorashada waxa laga dhex dooran doona xubnaha codka leh ee guddida farsamda.
Qodobka 5aad:Waajibaadka iyo masuuliyada gaarka ah ee guddida farsamada maamulka doorashada
Waajibaadka iyo masuuliyadda gaarka ah ee guddida farsamda maamulka doorashada ee ay qayb ka mid ah waajibaadkooda iyo masuuliyadooda ku xusan qodobada 14-15 ee xeerarka doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo madaxtooyada ee xeer lr.20/2001 oo ay wakiisheen guddida doorashooyinka qaranku waa sidan soo socoto:
1. Socod siinta hawl maalmeedka qabashada doorashooyinka goleyaasha deeganka iyo golaha wakiilada.
2. Diyaarinta miisaaniyada lagu maamulayo hawlaha doorashooyinka iyo u gudbinta guddida doorashooyinka qaranka iyo usoo diyaarinta qabyo qoraalka xisaabaha sadexda bilood ah guddida doorashooyinka qaranka si ay ugu gudbiyaan xisaabiyaha guud ee qaranka.
3. Soo diyaarinta taariikhda la qaban karo doorashooyinka iyo u gudbinta gudida doorashooyina qaranka si ay guddida doorashooyinka qaranka soo jeedinta maalinta doorashad ugu gudbiyaan madaxweynaha, si uu ugu soo saaro wareegto madaxweyne.
4. Diiwaangalinta codbixiyeyaasha ka hor taariikhda doorasdhada.
5. Samaynta daraasado la xidhiidha goobaha codbixinta, qoon deynta tiradaiyo goobaha codbxiinta degmooyinka iyo gobolada.
6. Diyaarinta magacaabista, caydhinta ama anshixinta shaqaalaha ee xarunta dhexe iyo xafiisyada doorashooynka ee degmooyinka iyo gobolada.
7. Hubinta goobaha codbxinta iyo goobaha kale ee la xidhiidha masuuliyadaooda ee laga xusho hab bakhtiyaa nasiib ah iyo hab qorsheyn intaba.
8. Ka garnaqista iyo dhexdhexaadinta khilaafaadka la xidhiidha doorahsooyinka, kuwaas oo saraakiisha doorashooyinka ee kala duwan usoo gudbiyaan.
9. Curinta shuruucda, siyaasadaha iyo xeerarka anshaxmarinta doorashooyinka ee xisbiyada siyaasadu iyo saxaafadda.
10. In ay ahaadaan masuuliyiinta ay la xidhiidayaan dhamaan daneeyeyaasha doorashoooyinka oo ay ka mid yihiin bulshada caalamka, hay’adaha fulinta, bulshada rayidka ah iyo in ay taageeraan ciidanka amaanka.
11. Isku gaynta natiijooyinka doorashooyinka ee degmooyinka iyo goblada iyo u dubinta guddida doorashooyinka si ay ugu dhawaaqaan natiijadaas ka hor inta aanay maxkamadu sare ansixin.
12. Mudada xilka guddida farsamada maamulka doorashooinku waxay ku eeg tahay maalinta ay maxkamadda sare ku dhowaaqdo natiijada doorashooyinka.
Qodobka 6aad:Xallinta khilaafaadka
Khilaaf kasta oo ka yimaadda ama la xidhiidha heshiish ama wax ka beddelkiisa ama fasiraadiisa waxa ka garnaqaya, xalna ka gaadhaysa maxkamadda sare, muddo 14 cisho gudahood, go’aanka ay gaadho maxkamadda sare waa go’aan kama dambays ah, waxaanu waajib ku yahay fulintiisa dhammaan dhinacyada , iyaga oo aan lahayn wax xaquuq racfaan ah.
Qodobka 7aad: Sharciga lagu dhaqayo iyo luuqada rasmiga ah ee heshiishka
Sharcigan waxa loo fasirayaa loona fulinaya si waafaqsan xeerarka Somaliland.